Uphononongo lwe 🥇eToro: Imirhumo yeqonga, ukuSasazwa, ii-Asethi ezinokuthengiswa, kunye noMgaqo ka-2022
Uphononongo lwe-eToro: Imirhumo yePlatform, iSasazo, ii-Asethi ezinokuthengiswa, kunye noMgaqo ka-2022
Uphononongo lwe-eToro, ngaba ungumtyali mali omtsha onomdla ekuthengeni izabelo kunye nezabelo? Okanye mhlawumbi ungaphezulu kwi-forex okanye kwi-Bitcoin? Nokuba yeyiphi na indlela, unokufuna ukuzama iqonga le-eToro.
Umrhwebi osekwe kurhwebo olwewebhu uthatha umhlaba wokurhweba ngesiqhwithi. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezili-12, i-eToro inomtsalane kurhwebo olusandula ukwenziwa ngenxa yokuba ilula kakhulu ukuyisebenzisa. Ngapha koko, ngokwenza nje imizuzu eli-10 yexesha lakho, unokuba neakhawunti exhaswa ngemali kwaye uthenge isabelo sakho sokuqala!
Ngaphambi kokuba wenze, siza kugubungela yonke into ekufuneka uyazi ngazo zonke izinto ze-eToro. Oku kubandakanya ukuba iqonga lisebenza njani, zeziphi izinto onokuzithenga kunye nokuthengisa, iifizi kunye neekhomishini, umgaqo, nokunye okuninzi.
Ndiyathemba ukuba uxhobile ngalo lonke olu lwazi luncedo luyakukunceda uthathe isigqibo malunga nokuba i-eToro yeyona broker ikulungele na!
Inkampani ye-broker broker esekwe kwi-Intanethi yaqala ukusekwa ngo-2006. Iqonga lenza ukuba uthengise ii-CFDs (izivumelwano zomahluko), kunye nendlela eqhelekileyo yokuthenga iiasethi.
Kwisebe le-CFDs, i-eToro ibamba yonke into ukusuka kwii-indices, iibhondi, izitokhwe, amandla kunye nesinyithi - ukubala nje ezimbalwa. Ngokubalulekileyo, ungaphinda 'uthenge' i-cryptocurrensets, izabelo kunye nee-ETFs ngokwesiko-okuthetha ukuba ugcina ubunini obupheleleyo beasethi ekuthethwa ngayo.
Ubume bexabiso layo-ubukhulu becala kwaye isabelo sokujongana iifizi, yenye yezona zinto zinomtsalane malunga ne-eToro. Umzekelo, izitokhwe zinokuthengwa ngaphandle kwekhomishini.
I-eToro sisiseko sokujongana neeasethi esijolise kubatyali mali abatsha abanokuthi bangaze bathenge isitokhwe esinye. Kananjalo, it iyacetyiswa kakhulu kubaqalayo ngenxa ye-interface yayo elula kodwa esebenzayo. Ngokwenyani ithatha umba wemizuzu ukubhalisa, ukufaka imali kwiakhawunti yakho, khetha ezinye izabelo oza kuzithenga, yiyo ke loo nto, uyathengisa!
Umrhwebi ulikhaya kwinani lezinye izinto ezinokuvela kwisihlwele. Umzekelo, i-eToro ibamba ezorhwebo kunye nezixhobo zokwenza ikopi. Oku kukuvumela ukuba 'unxibelelane' nabanye abathengisi beqonga - ukwabelana kunye nokuxoxa ngeengcebiso zotyalo-mali apha endleleni. Imeko yokuthengisa ikopi ye-eToro ikuvumela ukuba ukhethe umtyali mali onamava othanda inkangeleko yakhe, kwaye emva koko ubonise iipotifoliyo zabo.
Zeziphi iintlobo zezabelo endinokuzithenga?
Kufuneka kuthiwe i-eToro liqonga lee-asethi ezininzi. Ngale nto, sithetha ukuba uluhlu lweeklasi zeasethi- zombini ngohlobo lweeCFD kunye nobunini bendabuko. Nangona kunjalo, ngokubhekisele kwisitokhwe sayo, uya kuba nezabelo ezingaphezu kwe-800 onokukhetha kuzo.
Oku kuvela kwiimarike ezahlukeneyo zestokhwe, ke uneendlela ezininzi zokwahluka kwiimarike ezininzi zemali.
Kwabo banomdla wokutyala imali kwiinkampani ezithile zase-UK ezinje nge-RBS, iBritish American Tobacco, okanye i-AstraZeneca- uyakwazi ukwenza oku ngaphandle komzamo kwi-eToro.
Kuyafana nakwezitokhwe zamanye amazwe. Kananjalo ukuba ufuna ukwahlula iphothifoliyo yakho nangakumbi, unokukhetha okuninzi kule nkundla. Ukuya kufikelela kutshintshiselwano lwesitokhwe samanye amazwe, kwiqonga le-eToro unokufikelela koku kulandelayo:
I-NYSE (eUnited States)
NASDAQ (eUnited States)
Ngokumalunga neziphi izitokhwe ezikhethekileyo zecandelo onokuthi uzithenge, kukho ukhetho olubanzi onokukhetha kulo. Ezinye zeemarike ezikhoyo kuwe zibandakanya kwi-eToro zibandakanya:
Ukutya kunye nesiselo esitokisini
Ngamafutshane, i ETF ikuvumela ukuba utyalomali kwiqela leeasethi ngorhwebo olunye. Oku kunokuba zizabelo ezininzi eziboshwe kwi-FTSE 100, okanye ibhasikiti yesitokhwe esivela kwicandelo lobuchwepheshe. I-eToro ibamba ngaphezulu kwee-ETF ze-150 ezivela kumacandelo ahlukeneyo.
Kucacile ukuba kutheni abatyali mali begxalathelana ukuya kwii-ETFs xa kuziwa ekwakheni nasekudibaniseni iiphothifoliyo zabo. Ngendibano engena khomishini enikezelwa yi-eToro, yeyona ndlela ibalaseleyo yokukwazi ukwenza imali kuluhlu olubanzi lweeasethi ezahlukeneyo ngotyalo-mali olunye.
Ngenxa yokuba ababoneleli be-ETF bathenga kwaye bathengisa izabelo kuwe, ukutyala imali ngokulula kwi-eToro kuko konke okufunekayo. Emva kwayo yonke loo nto, awudingi kwenza enye into de ube ufuna ukwenza imali kutyalo-mali.
Ukuba ujonge ukongeza ezinye iimali zemali zedijithali kwiphothifoliyo yakho yorhwebo ke unethamsanqa, njengoko i-eToro ibonelela ngeemali ezili-16 zedijithali.
Ngokubalulekileyo, i-eToro ibe yenye yeenkokheli zehlabathi kwi-fintech (itekhnoloji yezemali) ukusukela kwinqanaba lokuqala le-blockchain. Ayinamsebenzi ukuba uyi-crypto pro okanye ucinga ngokungena kwimarike okokuqala- i-eToro yenza ukuba inkqubo yotyalo-mali ibe lula.
Utyalomali lwe-cryptocurrensets lukhuselekile kwi-100% kwiqonga le-eToro. Ngaphezulu koku, icandelo le-cryptocurrency liza nokufikelela kwiindlela ezahlukeneyo zokucinga zentlalo kunye nezixhobo zohlalutyo. Oku kubandakanya nolawulo lobungozi oluzenzekelayo- into eyimfuneko xa ufikelela kwi-cryptocurrensets.
Iimali ezikhoyo ngoku ukuba zezakho kunye nezorhwebo kwi-eToro zezi zilandelayo:
Ukuba ufuna nje ukuthenga i-cryptocurrency kwaye ubambelele kwiingqekembe kangangeminyaka eliqela. Uya kuthi, nangona kunjalo, uhlawule umrhumo ukuba uthatha isigqibo sokuthengisa ngokufutshane i-cryptocurrensets okanye usebenzise amandla. I-Crypto CFDs ayifumaneki phantsi kweCA.
Xa kuziwa kwinkqubo yokunciphisa i-cryptocurrensets kwi-eToro, ungakwenza oku ngokuma kwindawo yeCFD. Nangona ungumnini weasethi esezantsi, urhwebo lwakho lwe-cryptocurrency lubotshelelwe yinkqubo efanayo naleyo yeminye imiyalelo ye-CFD.
Ukuba awukaqiniseki nge-100% ukuba uziva uzithembile ngokwaneleyo ngokurhweba ngee-cryptocurrensets, kunokwenzeka ukuba ukope urhwebo. Oku kuthetha ukuba unokukopa umrhwebi onamava njenge-for-like. Kule meko, naziphi na izigqibo ezenziwa ngumrhwebi zibonisiwe (ngokomyinge) kwipotifoliyo yakho. Siza kugubungela ngakumbi kwintengiso yekopi kancinci kamva.
Into enomdla kukuba, i-eToro ngokwenene iqale njengengcali Forex yorhwebo iqonga elenzelwe ii-newbies. Kananjalo, uya kufumana ukhetho olubanzi lweemali eqongeni-zonke ezo zinokuthengiswa nge-24/7.
Oku kubandakanya uninzi lweejors kunye nabantwana, kunye nokukhethwa kwezibini ezingaqhelekanga. Xa urhweba nge-forex usebenzisa i-eToro, kuya kufuneka ubeke iliso 'kwiluhlu lwakho lokubukela' ukuze ubone ukuba ngaba ukhetho lwakho lwemali luyehla, okanye urhwebo ngokusebenzayo.
Kuya kucetyiswa ukuba uhlolisise inkxaso kunye nokuchasana ngokujonga kwiitshathi ze-forex ezinikezelwa kwiqonga. Umbono kukuthenga emva kwenkxaso kunye nokuthengisa ngaphambi nje komgca wokumelana. Soloko ujonga umrhumo xa uthengisa i-forex kwi-eToro, kuba oku kunokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko zentengiso ezikhoyo.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, unokuhlala ufumana umrhwebi wekopi kwi-eToro elicandelo lakhe lobungcali lithengisa kutshintshiselwano lwangaphandle.
Yonke imarike yesitokhwe emhlabeni jikelele inee-indices ezininzi okanye isalathiso- kwaye ezi zibuko lokuma kwenxalenye ethile yentengiso.
Ii-indices zibandakanya inani leequity ezahlukeneyo, kungenxa yokuba ezi asethi zihlala zilinganisana ngaphandle ukuba ii-indices zithathwa njengezizinzile ngakumbi kunesitokhwe ngasinye. Umzekelo, i-FTSE 100 ilandelela iinkampani ezili-100 ezinkulu kwiLondon Stock Exchange.
Ngenxa yokuba iinkampani zihlala zahlukile xa kufikwa kwintengiso yentengiso kunye nobungakanani, isitokhwe ngasinye sinesiphumo esahlukileyo kwisalathiso ekubhekiswa kuso. Umzekelo, njengoko uGoogle enesisindo esininzi ngakumbi kuneenkampani ezincinci kwisalathiso, ukuba isitokhwe saso sikhuphuka ngokubonakalayo, ixabiso elipheleleyo lesalathiso linokuphakama nalo, kungenjalo.
Apha ngezantsi sidwelise ii-indices ezintlanu ezaziwa kakhulu kwi-eToro, kwaye zezi zilandelayo:
Kwi-eToro, ii-indices zithengiswa njengee-CFDs. Isizathu soku kukuba azizizo iiasethi zemali kwaye azinakho ukutyalwa ngqo. Nangona kunjalo, ukusebenza okuncinci eToro kukutyala imali kwi-ETF elandelela isalathiso. Ngokwenza njalo, uyakuba nezabelo ezisisiseko kwaye ke unelungelo lokufumana izabelo!
IKhomishini ye-eToro kunye neMali zichaziwe
Ngaphambi kokuba uzibophelele kwistokhwe, kubalulekile ukuba ujonge umrhumo weqonga kunye nokwabelana ngeerhafu.
Ngale nto engqondweni, sidibanise ukophuka kwezona ntlawulo ziqhelekileyo ze-eToro onokuthi uhlangane nazo.
Akukho Khomishini kwiNtengiso yeStokhwe
Isakhono sokuthengisa isitokhwe ngaphandle kokuhlawuliswa nayiphi na ikhomishini koko kuseta i-eToro. Le meko kunjalo nokuba utyala imali e-UK okanye kwizabelo zamanye amazwe.
Olu hlobo lwesisa olutsalile ngaphezulu kwe-12 lezigidi zabatyali zimali kwiqonga. Emva kwayo yonke loo nto, abanye abathengisi abasebenziseka lula kunqabile ukuba babonelele ngomgaqo-nkqubo omkhulu wentlawulo, abanye bephela befikelela kwi-1-2% kurhwebo ngalunye.
Kubaluleke kakhulu ukuba wazi ukuba ungagqitha kuphela ezi ntlawulo zokwenza izabelo ukuba awuthengisi ngokufutshane, kwaye awusebenzisi ubungakanani kwisikhundla.
Ukuba usebenzisa amandla okanye uthengisa ngokufutshane kwinkampani- ngoku ujongene nesitokhwe seCFDs. Kananjalo, endaweni yokutyala imali kwiasethi ekuthethwa ngayo, unjalo urhwebo .
Ukuqonda ifayile ye- sasaza, umahluko phakathi kwexabiso 'lokuthengisa' kunye nexabiso 'le-bid' ye-asethi, kubalulekile. Le yenye yemirhumo ekufuneka uyiqwalasele njengenxalenye 'yokubuyela kutyalo-mali' (i-ROI).
Ukuya kuthi ga ekusasazeni kuqhubeke kwi-eToro, baya kutshintsha ngokungqinelana neemeko zentengiso ngelo xesha. Ke kule meko, akukho sakhiwo sikhoyo. Ngale nto ithethwayo, i-eToro ngokubanzi ikhuphisana kakhulu kwisebe elisasazekileyo- ngakumbi kwiiklasi ezinkulu zeasethi ezinje ngestokhwe, igolide, kunye nezalathiso.
Uyakwazi ukusebenzisa ezona ndawo zinokhuphiswano ngokusasaza ngorhwebo kwiiyure zokuvula eziqhelekileyo.
Nangona kungekho mrhumo wedipozithi, kufuneka uqwalasele iindleko zokuguqula imali. Isizathu soku kukuba iakhawunti yakho kwi-eToro iya kuhlala iboniswa kwiidola zaseMelika.
Xa ufaka i-akhawunti ye-eToro (usebenzisa indlela oyikhethileyo yokuhlawula) kuya kubakho intlawulo encinci ye-0.5% kuloo mali. Ke, masithi ubeke i- $ 1,500. Oku kuyakuxabisa i- £ 7.50 (0.5% ye- £ 1,500).
Xa kuziwa ekurhoxiseni imali yakho, kukho umrhumo omncinci wecandelo leedola ezintlanu, kwaye kungoku nje ujikeleze i- $ 5
Xa kufikwa ekuthengeni nasekuthengiseni izitokhwe zakho kunye nezabelo, i-eToro yenza ukuba inkqubo ibe lula kuwe.
Ukuze ukwazi ukufumana utyalomali oluthile zimbini kuphela iindlela onokukhetha kuzo.
Sebenzisa izihluzo kwilayibrari yesitokhwe ye-eToro ngokunciphisa ukukhangela kwicandelo okanye ukutshintshiselana kwenkampani.
Yiya ngqo kwinqanaba ngokufaka igama lenkampani ethile kwibhokisi yokukhangela.
IiOdolo zeStock ezikhoyo
Ngaphandle kokuba i-eToro ijolise kubatyali mali abatsha, isekhona iodolo elungileyo yee-odolo ezifumanekayo kuwe kude kufike kurhwebo.
Apha ngezantsi sidwelise ii-odolo zentengiso ezi-5 oya kuba nakho ukuzisebenzisa xa uthengisa kwi-eToro.
I-eToro ikuvumela ukuba uthenge isitokhwe ngexabiso elithile kwaye usete 'umda wokuyalela'. Ukuba ixabiso elibizwa ngokuba li-trigger aliphumelelanga urhwebo luya kuba nenqanaba 'elilindileyo' de lurhoxiswe (nguwe). Ukuba ixabiso liye lafezekiswa, i-odolo yakho iya kwenziwa.
Ngomyalelo wentengiso, uyakwazi 'ukubeka' urhwebo ngexabiso elikufutshane elikhoyo. Ngaphandle kweeyure eziqhelekileyo zokurhweba, i-oda yakho iya kwenziwa ngokukhawuleza xa i-stock exchange exchange okanye indawo yokuthengisa ivula.
Ukuyeka ukulahleka kwee-oda
Ukuba ujonge ukuthenga nokuthengisa izabelo ngaphezulu kwexesha elifutshane, ii-odolo zokuyeka ilahleko ziya kufaneleka kwisitayile sakho sokurhweba. Unokukhetha ukuvala urhwebo lwakho nje ukuba utyalomali lwehle ngesixa esithile., Konke oku kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo ngexabiso elimiselweyo.
Njengoko le ikwenza ukuba uvale urhwebo ngokukhawuleza nje ukuba kufikelelwe kwithagethi esekwe kwangaphambili, ii-odolo zenzuzo zilunge ngakumbi kubarhwebi bexesha elifutshane. Kwakhona, oku kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Ukuba ucinga ngokubamba izabelo kwi-eToro iminyaka eliqela, unokusebenzisa nje iodolo yokuthengisa ukuze wenze umsebenzi.
Intengiso yoLuntu kunye noRhwebo lweKopi
Unokuxolelwa ngokucinga ukuba i-eToro liqonga lokurhweba eluntwini. Kodwa, inyani yile, inokuninzi okunokukunika.
Oku kusizisa kwingcinga yokuthengisa yekopi. Beka ngokulula, kunye nokusebenzisa i-eToro kuzo zonke iindaba zamva nje, iingcebiso kunye izicwangciso zorhwebo -Ungazikrola izigqibo zokurhweba zabatyali mali abanamava ngaphandle komzamo omkhulu kwaphela.
Unokuthi i-eToro yeyentlalo urhwebo, yintoni uFacebook ekuhlaleni eendaba. Imalunga nokwabelana ngezimvo kunye nezimvo, kodwa kubatyali zimali kunye nezabelo. Uyakwazi ukujonga ubuninzi beemarike kwindawo kawonke-wonke kwi-eToro, kwaye ithandwa ngakumbi kunangaphambili.
Ukukunika umzekelo, masithi isithuba somrhwebi esihloniphekileyo nesinamava ezinye zeengcebiso zokurhweba kwi-eToro. Kweli qonga, uyakwazi ukujonga indawo yomrhwebi, kwaye uphendule kuyo njengaseto lweendaba zentlalo.
Ukuba uyi-novice xa kufikwa kutyalomali, oku kuqonda kunokuba luncedo. Ngapha koko, unokwazi ukongeza umrhwebi onomdla kuye njengomhlobo (oko kuthetha ukuba 'uyabalandela')
Yintoni ukuRhweba ngeKopi?
Urhwebo lwentlalo lukhulu kwaye luyaziwa kakhulu ngenxa yezizathu ezichazwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kufuneka kuthiwe ikopi yokurhweba isikwe ngaphezulu kwezorhwebo.
Ukuba awuzange uve ngekopi yokurhweba, indlela elula yokubeka kukuba uyakwazi ukukopa intshukumo yomtyali mali onamava, njengokuthanda (kodwa ngokomlinganiso). Xa ukopa yonke ipotifoliyo, wakha ekwahlukeni kweenjongo zakho zotyalo-mali ngokunjalo, kubandakanya notyalo-mali lwexesha elizayo.
Ingcinga yokuloba i-intanethi kangangeeyure okanye iintsuku kwisiphelo sokulinganisa ukuba zeziphi izabelo kunye nezabelo ekufuneka uzityala imali kunokuba lithemba elinzima kakhulu. Ngokuthengisa ikopi, uzigcinela uphando oluninzi, njengoko ingcali izakwenza konke oko ngaphambi kokwenza naziphi na izigqibo. Emva kwayo yonke loo nto, yimali yomtyali mali nayo esesichengeni.
Logama nje utyala ubuncinci be- $ 200, ungatyala imali kangangoko uthanda. Unokukopa ngaphezu komthengisi omnye we-eToro ngaxeshanye ukuba unqwenela. Abanye abathengisi bakwenza oku ukunciphisa ukubetha ukuba omnye umtyali mali enze isigqibo esibi.
Nanku umzekelo olula:
Masithi ukopa urhwebo olunamasheya ahlukeneyo angama-25, nge- £ 200,000 etyalwe imali.
Ngale mali, umrhwebi une-10% kwisitokhwe se-Twitter- esiya kuba yi- £ 20,000.
Ngoku masithi utyale imali eyi- $ 2,000 nje kwipotifoliyo yokuthengisa
Ngenxa yokuba yonke into kufuneka ihlale ilinganayo, utyalo-mali lwakho lwe-10% kwi-Twitter luza kufikelela kwi- £ 200
I-eToro ayihlawulisi ntlawulo ngokusebenzisa ikopi yorhwebo. Ngapha koko, uyakwazi ukuphuma kwisikhundla sakho nanini na xa uthanda ngokulula. Ngaphezulu koko, unolawulo olupheleleyo kwimali yakho kuba uyakwazi ukurhoxisa ii-odolo ezizodwa ngokwakho kwipotifoliyo yakho.
Ngelixa i-eToro inesixhobo esisesikweni somthengisi esikhutshelwa simahla, kukho ezinye iindlela zabathengisi abaphambili ngakumbi. Ezona ntlobo zimbini ziphambili zezixhobo zokwenza ikopi ezihambele phambili ezikhoyo kwiqonga le-eToro 'ziiphothifoliyo zentengiso' kunye 'neepotfoliyo zabarhwebi abaphambili'.
Nantsi inkcazo emfutshane yomibini:
Iiphothifoliyo zentengiso - esi sixhobo somrhwebi sinoxanduva lokudibanisa kunye nokukhetha iiasethi phantsi kwesambrela se-1 esiliqili sentengiso esikhethiweyo.
Iipotfoliyo zabarhwebi abaphezulu -Esi sixhobo sokurhweba ngekopi ngokuqinisekileyo sidibanisa abarhwebi abaqhuba kakuhle kakhulu kwiqonga le-eToro.
Zombini ezi zixhobo zomrhwebi zekopi zisebenzisa urhwebo lwe-algorithmic kunye nobukrelekrele bokuzenzela, kwaye zombini zilawulwa ngobungcali. Ukuze usebenzise ezi zixhobo zokwenza ikopi kufuneka utyale imali eyi- $ 5,000 kwiipotifoliyo zakho zekopi, ubuncinci.
Isicelo sokuThengisa simahla
Ukuba awuthandi ukususa amehlo akho kwibhola ngelixa uphosa urhwebo, ke usetyenziso lwe-eToro lotyalo-mali lusisindisi. Kwaye nokuba kungcono, isimahla.
Ungafikelela kwi-free urhwebo lwesitokhwe app kwizixhobo ze-Android neze-iOS. Ukuba awunaso isixhobo esihambelanayo, usenakho ukufikelela kwi-eToro ngesikhangeli sakho sewebhu esiphathwayo.
Ngokusebenzisa iapps-ungathenga okanye uthengise izabelo ekuhambeni. jonga ixabiso lepotifoliyo yakho kwaye udibanise okanye ukhuphe imali yakho.
Ukufikelela kuhlalutyo eToro
I-eToro ayinazinto zininzi onokukhetha kuzo njengamanye amaqonga xa kusenziwa uhlalutyo kunye nophando. Awuyi kuba nakho ukufikelela kuhlalutyo lweengcali, iingxelo zomvuzo okanye iiakhawunti zikarhulumente.
Ayisiyo yonke intshabalalo kunye nesithokothoko nangona, njengoko kukho iindidi zegrafu kunye neetshathi ezisekwe kwimbali yamaxabiso amanyathelo-kunye nomoya oqhelekileyo weemali eziphambili zothango.
Kufuneka kuthiwe i-eToro ayinakho ukukunika iindaba ezisisiseko, kwaye ke iqonga lilinganiselwe kubasebenzisi ababelana ngokwenzeka kweendaba ngokwabo.
Xa ulinganisa konke, ukunqongophala kwemirhumo yekhomishini, kunye nezinye izinto ezintle, zenzela ubuthathaka kuhlalutyo nakuphando. Emva kwayo yonke loo nto, akukho nto ikuthintelayo ekucingeni ngaphandle kwebhokisi kwaye ufumane olu lwazi kwenye indawo.
Sincoma imithombo efana neMorningstar kunye neYahoo Finance.
Iindlela zokuhlawula kwa-eToro
Kulula kakhulu ukufaka kwi-eToro njengoko benokhetho olukhulu kangaka lweendlela zokuhlawula ezixhaswayo.
Kwi-eToro, oku kubandakanya:
Iipaji ze-E ezinjengePaypal, iSkrill kunye neNeteller
Ukuba ujonge ukuthenga izabelo kwangoko, ke oku kuyakwenza ukufaka iakhawunti yakho umoya opholileyo. Nceda uqaphele ukuba uninzi lweedipozithi zenziwa kwangoko, kodwa kuya kuxhomekeka kwindlela oyikhethileyo yokuhlawula.
Ngaba iToro ikhuselekile ngokupheleleyo?
Ewe, enye yezinto zokuqala esicinga ngazo xa sisayina kuyo nayiphi na into entsha kukuba 'izakubiza malini kum?'. Nangona kunjalo, kule meko, kubalulekile kuyo Ekuqaleni jonga ukuba iqonga lilawulwa ngokupheleleyo.
Ewe kunjalo, oku kuqinisekisa ukuba unoxolo lwengqondo lokuba umrhwebi ojongana naye ungaphezulu kwebhodi kwaye akabaleki zasendle ngemali yakho oyifumene nzima.
Ngethamsanqa, i-eToro ineelayisensi ezintathu zenqanaba elinye, ezibandakanya:
I-CySEC: Ikhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano
I-FCA: Igunya lokuZiphatha kwezeMali
Bonke abatyali mali base-UK bawela phantsi kwe-FCA kunye ne-eToro (UK) lilungu le-FSCS.
Enkosi kuphuhliso lwakutsha nje, abatyali mali base-UK ngoku bagqunywe ngayo nantoni na engaphantsi kwe- $ 85,000 yi-FSCS, ngelixa ngaphambili elo nani laliyi- £ 50,000. Kananjalo le migaqo ibaluleke kakhulu kunye neelayisensi, kuya kufuneka unike ikhredithi apho kufanelekileyo. Ngale nto, sithetha ukuba i-eToro ibikade ikho kangangeminyaka eli-14 kwaye ke-ngaphezulu kwesigidi se-12 sabatyali mali abanakuphutha.
Ngaba ii-Cryptocurrensets zilawulwa kwi-eToro?
Hayi, kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba kwimeko yeemali ezixabisa imali ngokukodwa, akukho migaqo ikhoyo- ubuncinci e-UK. Oku kuthetha ukuba xa ungumnini wempahla yexabiso awuqinisekiswanga zizikim zembuyekezo yase-UK.
Oku kukwathetha ukuba ukuba awonelisekanga yile nkonzo nangasiphi na isizathu, awunakho ukuhambisa isikhalazo sakho kwi-Financial Ombudsman Service. Ngale nto ithethwayo, imvumelwano ngokubanzi kukuba i-eToro izakuzama ukusombulula nayiphi na imiba okanye iphendule nayiphi na imibuzo onayo- njengoko iqela layo lenkxaso kubathengi liphezulu.
Oku akuthethi ukuba awuyi kuba nazo naziphi na izikhuselo konke konke nangona. Kungenxa yokuba i-cryptocurrency i-CFD yorhwebo e-eToro do yiza nesibonelelo esongeziweyo se ukhuselo lwemimiselo. Kungenxa yokuba izixhobo zeCFD zilawulwa zahlulwe kwezinye iindidi zeeasethi.
Ukuba okwangoku ucinga ukuba iakhawunti ye-eToro inokuba yeyakho, sidibanise amanyathelo ambalwa ukuze uqalise.
Inyathelo 1: Ukuvula iAkhawunti
Ukuze uqalise kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi ye-eToro ukuze ubhalise. Njengalo naliphi na iqonga lokujongana nezabelo (ezilawulwayo) kuya kufuneka ufake iinkcukacha ezimbalwa ukubaxelela ukuba ungubani. Kananjalo, kuya kufuneka ungene:
Okulandelayo, i-eToro izakufuneka iqinisekise ukuba ungubani na wena, ukuthintela ukubiwa kwesazisi kunye nezinye izinto ezoyikisayo.
Ngoku uya kucelwa ukuba ulayishe iifom zezazisi kwaye ziya kuba kulayini:
Into enegama lakho nedilesi yendawo ohlala kuyo - njengengxelo yebhanki okanye ityala lemfonomfono.
Isazisi sikarhulumente-njengepasipoti yakho okanye ilayisensi yakho yokuqhuba
Ngokubanzi, i-eToro iyakuqinisekisa iakhawunti yakho entsha kwiyure enye. Ukuba uziva ngathi kuthatha ixesha, nxibelelana neqela lenkxaso yabathengi malunga neengcebiso.
Eli candelo lilula kuba amathuba-sele unombono wokuba yeyiphi indlela yokuhlawula ofuna ukuyisebenzisa kwiakhawunti yakho ye-eToro.
Ngoku kwimenyu ehlayo, khetha indlela yokubhatala ofuna ukuyisebenzisa. Emva koko, unokukhetha isixa semali ofuna ukusifaka kwiakhawunti yakho ye-eToro.
Yikhumbule into yokuba eyona idipozithi ifunekayo yi- $ 200 (£ 160-ish ngexesha lokubhala), kwaye kuxhomekeke kwindlela yokubhatala imali yakho iya kungena kwiakhawunti yakho kwangoko.
Nceda uqaphele ukuba ukuhanjiswa kwebhanki kungathatha iintsuku ezimbalwa, ke ukuba ufuna ukuqala kwangoko kusenokufuneka ukhethe enye indlela yokuhlawula.
Inyathelo 4: Thenga ezinye iZabelo
Ke, ngoku unemali kwiakhawunti yakho ye-eToro ungazithengela ezinye izabelo. Njengoko besikhe sakugquma ngaphambili, kukho iindlela ezahlukeneyo zokucoca ulwelo onokuzisebenzisa okwangoku ukugcina ixesha elininzi.
Ke, ukuba uyazi ukuba yeyiphi inkampani ofuna ukutyala imali kuyo, okanye unempahla ethile engqondweni, unokucoca iziphumo zophando ngokulula. Ukuba awunayo into ethe ngqo engqondweni unokujonga nje ilayibrari yeasethi ye-eToro kwaye ubone ukuba yintoni oyithandayo.
Umzekelo, ukuba ufuna ukuthenga izabelo, shaya nje 'iimarike zorhwebo' emva koko uye 'esitokisini'. Nje ukuba ufumane into ongathanda ukuyithenga kuyo, unokufaka nje isixa ofuna ukusityala (kwiidola zaseMelika).
Cofa 'urhwebo oluvulekileyo' ukugcwalisa iodolo yesitokhwe xa imarike ivulekile. Okanye, ukuba ukutshintshiselana ngesitokhwe kumbuzo kuvaliwe ngelo xesha, vele ubethe 'ukuseta iodolo'
Iinkonzo kunye neengozi ze-eToro
Iimpawu ezizodwa kurhwebo lwentlalo kunye nekopi
Akukho mrhumo wonyaka
Ukukhethwa kwezabelo ezingaphezu kwama-800
Akukho zindleko zokujongana nesabelo
Ukuthengisa ii-CFDs okanye ukuthenga izabelo, ii-ETFs kunye nee-cryptocurrensets
Iqonga elisebenziseka lula umsebenzisi
UK kunye nokufikelela kwamasheya kumazwe aphesheya
Akukho kuninzi kwindlela yohlalutyo kunye nophando
Intlawulo yokuguqulwa kwemali ye0.5% xa ufaka imali
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezili-12, kucacile ukubona ukuba kutheni abatyali mali basebenzisa i-eToro ukukhulisa imali yabo yokurhweba. The
iqonga lilula kakhulu, ke lilungile kubaqalayo. Ngobunzima, ukunqongophala okubonakalayo kwemirhumo yekhomishini kunye neerhafu zokujongana nazo zinomdla kakhulu kubatyali mali.
Yongeza kwinto yokuba kukho umrhumo wonyaka kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhlawula ekunikezelweni, i-eToro ikwanika umdla kubatyali mali abanamava. eToro ayixhasi kuphela utyalomali olukumgangatho ophantsi, njengoko unokuthengisa ngokufutshane kwaye usebenzise amandla.
Kunye nenyani yokuba zingaphezulu kwama-800 izitokhwe ezahlukeneyo ezikhoyo, kukho into eyenzelwe wonke umntu olapha. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwimpahla yorhwebo kunye neebhondi zeCFD ukuya kwi-forex, ii-indices kunye nee-cryptocurrensets. Nokuba awukhethi zigqibo, awuyi kuba mfutshane ekukhetheni.
I-eToro USA LLC ayiboneleli ngee-CFDs kwaye ayimeli nto kwaye ayithathi tyala malunga nokuchaneka okanye ukugqibelela komxholo wale ncwadi, olungiselelwe liqabane lethu sisebenzisa ulwazi olukhoyo olungelolungu eluntwini malunga
Yasekwa kudala kangakanani i-eToro?
I-eToro yasekwa ngo-2006 ngeenjongo zokunciphisa ukuxhomekeka kumaziko emali aqhelekileyo nokwenza ukuba urhwebo lufikeleleke ngakumbi kumndilili kaJoe.
Ngaba ikhona usetyenziso lweselula lwe-eToro?
Ewe. Kukho usetyenziso olusimahla lokurhweba ngefowuni olufumanekayo kwizixhobo ze-android neze- iOS.
Ndingazifumana izabelo kwi-eToro
Ewe. Kodwa kuphela xa uthenga izitokhwe zesahlulo. Xa izabelo zihlawulwe isabelo sakho sezahlulo siya kubonakala kwiakhawunti yakho ye-eToro.
Ngaba i-eToro ilawulwa ngokupheleleyo?
Ewe. I-eToro ineelayisensi ezi-3 ezahlukeneyo kwaye ziyiCySEC, ASIC kunye neCA.
Ngaba ikhona idipozithi encinci esebenzayo kwi-eToro?
Ewe ilapho. Ixabiso elincinci elifunekayo yi- $ 200 (malunga ne- £ 160 ngexesha lokubhala)